छविहरू र थ्रीडी मोडल गुगल अर्थबाट आयात गर्नुहोस् - जिओफुमाडास
मे, 2011 गुगल अर्थ / नक्सा, Microstation-बेन्टले, topografia
माइक्रोस्टेशन, संस्करण 8.9 (XM) बाट Google Earth सँग अन्तर्क्रिया गर्नको लागि प्रकार्यहरूको एक श्रृंखला ल्याउँदछ। यस अवस्थामा म त्रि-आयामिक मोडेल र यसको छविको आयातलाई सन्दर्भित गर्न चाहान्छु, यो केहि समान हो ओटो सीएड सिविल एक्सएनएमएक्सएक्सडी.
यी कार्यहरू निम्नद्वारा सक्रिय छन्:
वा यदि माईस्कस्टेशन स्पेनिश मा छ भने, जो अभ्यास लागत मा अनुकूलन मा:
यो माइक्रोस्टेशनमा चल्ने कुनै प्लेटफर्मको प्रकार्य हो, जस्तै पावरसिभिल, बेंटली नक्शा, बेंटले कोक्स, आदि। छैठौं र सातौं आइकनले सेवा दिन्छ, एउटा गुगल अर्थ दृश्य सिnch्क्रोनाइज गर्न हामी मध्ये एकमा माइक्रोस्टेशनमा र अर्कोमा रिभर्स गर्नका लागि। चौथो आइकन भनेको गुगल छविलाई नक्शामा ल्याउनु हो।
1 Dgn फाइल
सुरू गर्न, यो प्रकार्यलाई dgn फाइल 3D हुन आवश्यक छ, यदि हामीसँग 2D बीउसँग फाइल छ भने, के गर्न सकिन्छ:
फाईल> निर्यात> थ्रीडी
त्यसोभए हामीले निर्यात गरेको फाइल खोल्छौं। अन्य-हुनु पर्छ सुविधा एक भौगोलिक संदर्भ प्रणाली हो। यो माइक्रोस्टेशन .8.5. after पछि एक बिट परिवर्तन भयो, तर यसले सामान्यतया ती संस्करणहरूको साथ एक निर्दिष्ट प्रणालीलाई मान्यता दिन्छ यद्यपि कहिलेकाँही यो मात्र उल्लेख गर्दछ एक UTM प्रणाली तर यसले क्षेत्र परिभाषित गर्दैन। यदि तपाईंसँग एक छैन भने, यो बारको पहिलो आईकनको प्रयोग गरेर गरिन्छ जुन मैले पोष्टको सुरूमा देखाउँथें र प्रणाली छनौट गर्थ्यो जुन लाइब्रेरीबाट हाम्रो रुचि राख्दछ। यस मामलामा हामीले एउटा प्रक्षेपित प्रणाली तोक्नु पर्छ (नर्थि,, ईस्टर्निंग ...) र हामी वर्ल्ड (UTM) विकल्प WGS84 डाटामको साथ छनौट गर्दछौं, किनकि यो गुगल अर्थ द्वारा प्रयोग गरिएको प्रणाली हो।
यति धेरै संघर्ष गर्न को लागी, तपाईं प्रणालीलाई मनपर्नेमा असाइन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसैले तपाईले हरेक पटक खोज्नु पर्दैन।
गुगल अर्थ को मामला मा कम्पास, स्थिति पट्टी, ग्रिड वा कुनै अन्य तत्वहरु लाई लुकाउन को लागी सुविधा छ कि हामीलाई चासो छैन। यो विकल्पको साथ पनि सम्भव छ ऐतिहासिक तस्बिरहरू जुन गुगल अर्थ from बाट आएको हो, हामीले चासो नदेखाएको बर्षको कभरेज बन्द गर्दै, धेरै जसो सबैभन्दा हालसालहरू कम देखिन्छन्। एकचोटि तयार भएपछि, हामीले चासोको क्षेत्र छनौट गर्नुपर्नेछ, र गुगल अर्थ र माइक्रोस्टेशनको बीचमा सिन्ख्रोनाइज गर्नुहोस्।
त्यहाँ एक प्यानल छ जसले हामीलाई केहि कन्फिगरेसनहरू प्रदान गर्दछ, तर अभ्यासमा तिनीहरू उपयोगी हुँदैनन् किनभने गुगल अर्थ द्वारा प्रयोग गरिएको ठाडो सन्दर्भ प्रणाली एकदम सरलीकृत गरिएको छ, संयुक्त राज्य अमेरिका र पोर्टो रिकोका केही क्षेत्रहरूमा केही अपवादहरू सहित। त्यसैले उचाई विचलन छनौट गर्न मा सानो कुरा छ; यहाँ के महत्त्वपूर्ण छ परिभाषित गर्न को लागी एक त्रिकोणित जाल वा ग्रिड प्रयोग गरिनेछ कि छैन; विकल्प "दृश्य इलाका" सँधै सक्रिय हुनुपर्दछ।
2 चित्र आयात गर्नुहोस्
छवि आयात गर्न तपाईले बारमा चौथो बटन छनौट गर्नुपर्नेछ र स्क्रिनमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। नतिजाको रूपमा हामी क्याप्चर गरिएको reticle प्राप्त गर्नेछौं।
छवि हेर्नको लागि, हामी बनाउँछौं: उपकरणहरू> रेन्डर> दृश्य, र यससँग हामीले प्यानल प्राप्त गर्यौ जसमा हामीले प्रतिपादन, लाइन दृश्यता र छविको चमकको प्रकारको कन्फिगरेसनको निर्णय गरेका छौं।
Isometric मा मोडल हेर्न, हामी यो भ्यूमा रहेको उपकरणको साथ गर्छौं, र हामी isometric राम्रोसँग राख्छौं हामी यसलाई स्वतन्त्र रूपमा घुमाउँदछौं। हेर्नुहोस् कि यो केवल एक fenced क्षेत्र रेन्डर गर्न को लागी सम्भव छ बाड़ वा एक वस्तुमा आधारित क्षेत्र। र यदि हामी विकल्प छनौट गर्दछौं स्टेरियो, हामी स्टेरिस्कोफेसिक लेंस संग काम देख सकते हो -ती व्यक्तिहरू जसले सिनेमा छोडेर फर्काउन बिर्सन्छन्-। प्यानल जुन मैले तल देखाउँछु अनुप्रयोगको आधारमा अलि फरक छ, किनकि यस केसमा मैले प्रयोग गरिरहेको छु PowerCivil त्यो अधिक प्रतिपादन विकल्प छ।
तस्बिर खैरो स्केलमा आउँछ र गुणस्तरको कमजोरी कम छैन किनकी यो एक मात्र हो प्रिन्ट स्रीन; Google प्रो संस्करण प्रयोग गर्दा र Google Earth लाई DirectX मोडमा राख्दा सुधार हुन्छ। डिजिटल मोडेलको मामलामा यसलाई गुगलले प्रस्ताव गरेको भन्दा बढी सुधार गर्न सकिदैन, तथापि यो पूरक कामको लागि पर्याप्त व्यावहारिक तरिका देखिन्छ। स्टिचमैप्स, जसको साथ तपाईं उच्च गुणवत्ता छवि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र यससँग तपाईं georeference गर्न सक्नुहुनेछ.
जबकि यो एक डिजिटल मोडेल र छवि, प्रत्येक समय परिवर्तन रेखापुंज प्रबन्धक संग अलग चार्ज गर्न सकिन्छ जो एउटै निर्देशिका उत्पन्न भएको छ छवि, प्रतिपादन लागू छ लागि देखाउन चढाएको ओगटेको छ।
केही शंकाहरूको स्पष्ट पार्दै: थ्रीडी भवनहरू ल्याइएन, किनकि यी डिजिटल मोडेलको भाग छैनन् र मोडेलको शुद्धता साना क्याप्चरहरू गरेर सुधार गर्न सकिन्छ। सान सेबास्टियनको उदाहरण लिनुहोस्, जहाँ जानकारीको गुणस्तर लक्जरी हो; दायाँमा उही शट जुन विभिन्न स्तरका जुममा लिइएको हो।
अहिलेसम्म, PlexEthth मेरिट Google धरती र एक सीएडी प्लेटफार्म बीचको उत्कृष्ट एकीकरण उपकरणको रूपमा लिइन्छ।
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो गुगल अर्थ; कार्टोग्राफरहरूको लागि भिजुअल समर्थन
अर्को पोस्ट अटोक्याड मुक्त 2013 को राम्रो पाठ्यक्रमअर्को »
Rep जवाफहरू "गुगल अर्थबाट छविहरू र थ्रीडी मोडेल आयात गर्नुहोस्"
मूल्यांकन संस्करण अनुरोध गर्न, सम्पर्क गर्नुहोस् Jesus.Zenteno@bentley.com मध्य अमेरिका र मेक्सिकोको लागि प्रतिनिधि हो।
त्यहाँ वेबसाइटमा एक सम्पर्क ईमेल हो।
म उजुरी कार्यक्रम चाहन्छु जहाँ मैले दर्ता र डाउनलोड गर्दछु
निस्सन्देह, यो निःशुल्क छैन।
यदि तपाईंले SELECT सेवामा दर्ता गर्नुभयो भने परीक्षण संस्करण अनुरोध गर्न सम्भव छ, यदि तपाईको प्रोफाइल लागू हुन्छ भने।
मेरो GoogleEart मा प्रयोग गर्न यो उपकरण कहाँ डाउनलोड गर्न सक्छु